Fikradaha Ganacsaduhu Saamaynta Falalkiisa | vfxAlert official blog
Sida isgaarsiinta ganacsadaha naftiisa u saameynayo natiijada ganacsiga
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu muujiyey in la'aanta xiriir wanaagsan ay noqotay dhibaato weyn, xagga siyaasadda iyo nolol maalmeedkaba. Waxaan waqti dheeraad ah ku qaadnaa blogyada, shabakadaha bulshada, iyo isgaarsiinta tooska ah ee sii yaraanaya.
Wadahadalka shakhsi ahaaneed, waa inaad la kulantaa dhibaatooyin aysan awoodin inay xalliyaan; dadku way diidaan inay wax u aqbalaan sida ay yihiin; ka jawaab su'aalaha adkayn kara xaalad hore u adkayd. Waxaa laga yaabaa moodooyinka casriga ah ee isgaarsiinta dadka inay ka tagaan raad, oo ay ku jiraan sida aan nafteena ula dhaqanno.
Aynu aragno inta ay le'eg tahay isgaarsiinta ganacsadaha naftiisa ay saameyn ku yeelaneyso diyaarinta qorshe ganacsi, sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , la'aanteedna xitaa kama shaqeyn kartid koontada demo.
Fikirku wuxuu saameeyaa ficilka
Ilaa aan ka fikirno sida xoogga leh ee fekerku u saameeyo nolol maalmeedkeena, waxay u qulqulayaan sida webi oo kale. Badanaa waxay soo baxdaa in fikradahan ay leeyihiin u janjeera inay si joogto ah madaxa ugu rogmadaan, tani waxay u horseedi kartaa falal aan loo baahnayn ama lama filaan ah. Kuwaas waxaa ka mid ah fikradaha noocan ah:
Haddii aan qaldanahay, waa inaan u jawaaba qoyska ama maal-galiyaha;
Haddii aan dhaqso u dhaqaaqo ama goor dambe, waxaan waayi doonaa fursad weyn;
Maxaa igu kalifay inaan u maleeyo inaan saxanahay?
Markii ugu dambeysay ee ay shaqeysay waxay ahayd markaan jabiyay istiraatiijiyadeyda xeerarka ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah.
Inbadan oo naga mid ah ayaa la socda hadaladooda, maxaa yeelay waxay leeyihiin fikrad cawaaqib xumada ka dhalankarta muujinta fikradaha bilaa fikirka ah. Haddii aan tan ku qabanno dadweynaha, waa inaan barannaa sida loo sameeyo gudaha dhexdeenna si aan u gaarno natiijooyin wanaagsan. Hoos waxaa ku yaal tusaale ka mid ah xakamaynta noocaas ah:
“Waxaan wanaajiyay aqoontayda falanqaynta farsamada iyo xaaladdayda nafsiyeed si aan u gaaro natiijo wanaagsan. Markaan sii wado tababbarkayga, waxaan awoodi doonaa inaan gaaro wax badan »;
Waxaan ahay ganacsade wanaagsan; ikhtiyaarradeyda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa faa'iido leh maxaa yeelay waxaan raacayaa istiraatiijiyad si fiican loo horumariyey. Ganacsiga maalin kasta wuxuu ii keenayaa aqoon cusub »;
Erayo ka fudud: «" Maalin kasta, ficil kasta oo aan sameeyo, waxaan ku fiicnaadaa ganacsade ahaan iyo qof ahaanba »
Beddel aragtidaada dadka kale
Haddii qof kuugu yeero khamaariiste lacag tuura, isagoo leh waligaa ma noqonaysid ganacsade guuleysta, kaliya ku jawaab: «Waad ku mahadsantahay welwelkaaga. Waan ogahay inaad sida ugu fiican aniga kaliya iiga dooneyso taladaada. Ganacsi waa xirfad taas oo, iyadoo loo maro habka saxda ah, ay ku siiso fursad aad nolol ku kasbato. Ma qaadanayo wax jaanis ah, khatarteyda si taxaddar leh ayaa loo xisaabiyaa. Haddii sababo jira awgood aanan u maareeynin inaan lacag sameeyo, waxaan dib u eegi doonaa istiraatiijiyaddayda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ama habdhaqankayga xagga ganacsiga ka hor intaanan qatarta u gelin mar kale ».
Ama ereyo ka fudud: «Waxaan galayaa ganacsi halisteeda ay faa'iido leedahay». Waxaa laga yaabaa in tan: dhaleeceynta ay cadaalad noqon karto haddii ficiladaada suuqa aysan wax faa'iido ah keenin muddo dheer.
Soo koob . Wadahadalku wuxuu saameeyaa ficiladaada. Haddii aad dhageysatid codkaaga gudaha, adoo isku dayaya inaad u bedesho qaab wanaagsan, waxaad si muuqata u wanaajin kartaa fahamkaaga sida calaamadaha u shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.